दीक्षान्त समारोहमा मीरालाई मानार्थ पीएचडी
काठमाडौं (अस) । अमेरिकाको वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीले अस्ट्रा ट्रेल रनर मीरा राईलाई मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरेको छ । युनिभर्सिटीद्वारा आइतवार प्रेसिडेन्सियल बिजनेश स्कूल, काठमाडौंमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा राईको साहसिक कार्यको सम्मान गर्दै यो उपाधि दिइएको हो ।
उक्त दीक्षान्त समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उक्त युनिभर्सिटीका प्राडा. डेभिड मेकेनीले राईलाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरेका हुन् । प्रेसिडेन्सियल बिजनेश स्कूल वेस्टक्लिफबाट सम्बन्धन प्राप्त बिजनेश कलेज हो । उपाधि ग्रहण गर्दै मीराले आफूले सपनामा पनि नसोचेको उपलब्धि पाएको बताइन् । उनले यो उपाधिबाट आफूजस्तै अस्ट्रा ट्रेलमा दौडने नवप्रतिभालाई पनि थप मेहनत गर्न प्रेरणा मिल्ने आशा व्यक्त गरिन् ।
भोजपुरमा जन्मिएकी राई अन्तरराष्ट्रिय अल्ट्रा रेसमा चर्चित नेपाली नाम हो । उनी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई विभिन्न उपाधि हासिल गरेकी छिन् । उक्त समारोहमा उपराष्ट्रपति पुन र प्राडा. मेकेनीले वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका प्रेसिडेन्सियल बिजनेश स्कूलका ९५ छात्रछात्रालाई दीक्षित गराउँदै प्रमाणपत्र प्रदान
दीक्षान्त समारोहमा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण केसीले आफूलाई चिनेर अगाडि बढ्दा सफलता हात पार्न सकिने बताए । उनले अमेरिकाको वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा पे्रसिडेन्सियल बिजनेश स्कूलले नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताए । उनले स्कूलका विद्यार्थीले नेपाल र अमेरिकाका विभिन्न संस्थामा काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए । केसीले देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्नो स्कूल लागेको र आफ्ना विद्यार्थी बजारमा अब्बल रहेको दाबी गरे । युनिभर्सिटीका प्राडा. मेकेनीले बजारको आवश्यकता र मागअनुसार विश्वविद्यालयले पठनपाठन गरिरहेको बताउँदै नेपाली छात्रछात्रा उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको तालाबन्दी अझै नखुल्ने संकेत[२०७६ माघ, ८]
विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे नयाँ मापदण्ड लागू[२०७६ पौष, १७]
डीएभी विद्यालयले पाठ्यक्रममै आनुभविक शिक्षण प्रणाली जोड्दै [२०७६ पौष, १५]
प्रदेश २ मा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना हुदैँ[२०७६ पौष, ६]